I-Rural Apartment enemibono yeentaba
Ifulethi langoku lilungele unyaka wonke iiholide kubandakanya ukutyibilika ekhephini, imizuzu emi-5 kude nesikhululo seenqwelomoya kwindawo yasemaphandleni enembono entle yeentaba.
Eli gumbi likumgangatho ophantsi linegumbi lokuhlala elikhulu lokuphumla, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye namawele kunye negumbi lokuhlambela elikhulu. Kukho iingcango zepatio kuwo onke amagumbi akhokelela kwi-terrace. Kukho indawo yokupaka ngaphandle kweflethi
Ukuphakanyiswa kwegondola ukuya eKrvavec ski resort malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwindlu. Ungaqesha izixhobo zebhodi yokutyibiliza/ikhephu kwindawo yokuchithela iholide yaseKrvavec kangangeentsuku ezininzi njengoko kufuneka kwaye akunyanzelekanga ukuba uyibuyisele ekupheleni kosuku ngalunye okuthetha ukuba unokuyithatha uhambe nayo kwezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, uyibuyisele eKrvavec ukuphela kokuhlala kwakho. Sisoloko sikwenza oku . Kukho ezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kumgama ofanelekileyo wokuhamba, iindawo zokuchithela iiholide zaseSlovenia zaseKranjski Gora, eCerkno naseRogla zikumgama weyure. Ngokukwanjalo iindawo zokuchithela iiholide zaseAustria zaseBad Kleinkirchenheim, Villach, Innerkrems. Ngaphaya komda wase-Italiya kukho iindawo zokuchithela iiholide zaseTarvisio naseSella Nevea. Kukho ezinye iindawo ezincinci zokuchithela i-ski eSlovenia ezikufutshane nesandla kodwa ikhephu alithembekanga kangako. Konke kuxhomekeke kwinto oyifunayo ngokwenene. Abanye abantu bayakuvuyela ukuchitha iveki eKrvavec, abanye bakhetha ukuhambahamba. Ndikhe ndatyibilika kuzo zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezikhankanyiweyo xa ndihlala eflethini kodwa sihlala siqala kwaye sigqibezela eKrvavec.
Ndimele ndikhankanye ukuba umahluko omkhulu phakathi kweSlovenia kunye ne-Italiya kunye ne-Austria, i) ixabiso layo yonke into ukusuka ekutyeni kunye nokusela ukuya kwii-ski passes ziphantsi kakhulu kwaye b) ngokubanzi zixakekile.
Ii-spa kunye namachibi okuqubha
Kukho "ihlabathi lamanzi" elikhulu kakhulu eLjubljana malunga nemizuzu engama-20 yokuqhuba, kwaye kukho iispas ezinamachibi, i-sauna njl. kufutshane kwezinye iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide. Sisebenzisa enye ekufutshane neRogla ski resort xa sikhe sityibiliza phaya. Kukwakho nespa/ ichibi lokuqubha elikwimizuzu engama-40 kude elibizwa ngokuba yiTerme Snovik. www.terme-snovik.si
Kukho uthungelwano olulungileyo lweendlela zokujikeleza kwindawo ekufutshane. Iibhayisikili zinokuqeshwa kwi-Domacija Vodnik - ihotele kunye nevenkile yokutyela e-Adergas - nje phezulu kwendlela.
Kukho ivenkile enkulu, unosilarha, umbhaki, ibhanki eCerklje ekumgama omizuzu esi-7 xa uqhuba unyuka ngendlela eyanele zonke iimfuno zakho. Kukho ukhetho oluhle lweevenkile ezinkulu ezingaphandle kweKranj.
Iindawo zokutyela kunye neeBar
I-Pizzerija pod Jenovo lipo 10 imiz Ipizzeria elungileyo kwindlela eya kwi-Krvavec ski resort
I-Pizzerija Tonac 10 imiz I-Mexican / i-pizzeria kwindlela eya kwindawo yokutyibiliza
I-Pizzerija Botana 12mins
Dvor Jezersek brink 10 mins Past Cerklje kwindlela eya ngaseVodice, ekupheleni kwelali iZgornji Brink jika ngaphambi nje kophawu lokumisa iimoto zethu.
Iintsuku ezimbalwa ezicetyisiweyo zokuphuma / Imisebenzi
Ukusuka kwindlu ungahamba ngokuthe ngqo kwiintaba nge-Adergas.
Kukho ukuhamba okuninzi; ukunyuka kunye namanye amathuba angaphandle kuwo onke amanqanaba okuqina ukusuka kuhambo olufutshane ukuya kumzamo weentsuku ezi-2 eTriglav - eyona ntaba iphakamileyo eSlovenia.
I-Lakes Bled kunye ne-Bohinj yenza iintsuku ezimnandi ngaphandle, ungalibali ukuzama ikhekhe elidumileyo le-Bled.
KwiVelika Planina, ekufikelelwa kuyo ngemoto enekhebula kukho indawo entle yealpine meadow ehlala uninzi lwabelusi.
I-Skofja Loka yidolophu yakudala enomdla.
I-Ljubljana-Idolophu enkulu edibeneyo yaseSlovenia-imizuzu engama-30 kuphela ukusuka
Umqolomba wasePostjana-Owona mqolomba waziwa kakhulu emhlabeni ofikelelwa ngololiwe. Iikhilomitha ezingama-24 zeepaseji, ezichazwa ‘njengeparadesi yestalactite kuzo zonke iikona’
Inqaba yasePredjama- ithe ngcu phezulu kwingxondorha ethe nkqo, eyona nqaba inkulu yomqolomba ehlabathini.
Iindwendwe ziya kuba nokusetyenziswa ngokupheleleyo kwezindlu
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$270